वर्षा नहुदा खेत बाँझै , किसान मार्कामा - VOICE OF NEPAL
वर्षा नहुदा खेत बाँझै , किसान मार्कामा
२३ असार २०७६, सोमबार १२:३७ 84 ??? ???????
– आशिषबहादुर सिंह , बझाङ ।
धान रोप्नका लागि पर्याप्त वर्षा नभएपछि किसान मर्कामा परेका छन् । आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्ने बझाङका अधिकांश किसानलाई यो वर्ष पानी नपर्दा धान रोप्न समस्या भएको हो । असार बित्नै लाग्दासमेत राम्रोसँग पानी नपरेपछि खेत बाझै राख्नु परेको किसान बताउछन् ।
बाह्रैमास पानी लाग्ने कुला र खोलाहरुमा पानीको सतह घट्दै गएपछि किसान झनै चिन्तित् बनेका छन् । पानी नपरेपछि किसानले धान रोप्नको लागि राखेको बेर्नासमेत सुक्न थालेको छ । आकाशे पानीमा निर्भर पर्ने किसानहरुको समस्या त छँदै थियो । बाह्रैमास कुलो चल्ने किसानले पनि खेतमा धान रोप्न पाएका छैनन् ।
खोलाहरुमा जथाभावी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन् गर्दा खोला तल र कुलोमाथि भएपछि किसानलाई खेतसम्म पानी पुर्याउन समस्या भएको छ । खोला सुक्दै जानु र समयमा वर्षा नभएपछि बझाङ जिल्लाका अधिकांश खेत बाँझै छन् । खेतमा राखेको बीउ पानी नपाएर सुक्न थालेपछि किसान झनै चिन्तित् भएका हुन् । गत वर्ष यो समयमा पुरै खेतमा धान रोपिसकिएको थियो । तर यो वर्ष असार दोस्रो साता बितिसक्दा पनि खेतमा धान रोप्न सकिएको छैन । केदारस्यू गाउँपालिका–१, का किसान रिमा मल्लले भन्नुभयो, ‘खेतमा कुलो लाग्दैन, खोलामा पानी छैन, आकाशे पानीको भर परेपछि खेत बाँझै छ ।’
‘खेतमा धानको बीउ राखेको महिना दिन बढी भइसक्यो’, जयपृथ्वी नगरपालिका–३का भरत खड्काले भन्नुभयो, ‘धान रोप्नका लागि पानी छैन, वर्षाको पानीमा धान रोप्ने गरिन्थ्यो यसपटक पानी पनि परेन ।’
समुद्री सतहबाट केही उच्च भेगमा रोपाइँ भएकाले सिँचाईका लागि अन्य कुनै विकल्प नभएको किसान बताउँछन् । खोलामा पानी सुक्दै गएको तथा आकाशबाट वर्षा पनि नभएकाले धान रोप्न नपाउँदा भोकमरीको अवस्था आउँला भन्ने डरले किसान चिन्तित् रहेका छन् ।